Zimbabwe's lion guard program helps protect rural villages | Daily Mail Online
Zimbabwe's lion guard program helps protect rural villages
Published: 13:40 EDT, 14 October 2015 | Updated: 13:40 EDT, 14 October 2015
In this photo taken Tuesday Sept. 29, 2015 a lion guard, wearing a lion-like mask, demonstrates how he scares off lions using a plastic horn during a training session at their base in Hwange, south west of Zimbabwe's capital Harare. Zimbabwe¿s lion guards are brave community members selected and trained to prevent attacks on humans and cattle by big cats who stray from the unfenced Hwange park, which sprawls over 14,500 square kilometres (5,625 sq. miles) in western Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
This reported has been corrected to show that contributor's last name is spelled Musiya.
In this photo taken Tuesday Sept. 29, 2015 a lion guard, wearing a lion-like mask, uses a plastic horn to scare off lions, during a training session at the base in Hwange, south west of Zimbabwe's capital Harare. Zimbabwe¿s lion guards are brave community members selected and trained to prevent attacks on humans and cattle by big cats who stray from the unfenced Hwange park, which sprawls over 14,500 square kilometres (5,625 sq. miles) in western Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this photo taken Tuesday Sept. 29, 2015 lion guards demonstrate how they scare off lions using a plastic horn and clapping wooden blocks during a training session at their base in Hwange, south west of Zimbabwe's capital Harare. Zimbabwe¿s lion guards are brave community members selected and trained to prevent attacks on humans and cattle by big cats who stray from the unfenced Hwange park, which sprawls over 14,500 square kilometres (5,625 sq. miles) in western Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)
In this photo taken Thursday, Oct,1, 2015, a lion walks in the Hwange National Park, south west of the capital Harare. Lion guards are selected from the community and trained to prevent attacks on humans and cattle by big cats who stray from the unfenced Hwange park, which sprawls over 14,500 square kilometres (5,625 sq. miles) in western Zimbabwe. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi)